Su'aalaha Badanaa la Isweydiiyo - YTpals
Halkan waxaa ah jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee la isweydiiyo. Haddii aanad ka heli karin jawaabta halkan, email noogu soo dir.
Sideen u isticmaalaa goobta?
Markaad booqato YTpals, dhagsii isku xirka "Galida / Diiwaangalinta" ee ku yaal menu-ka sare.
Kadib waxaa lagaa doonayaa inaad gasho akaawnkaaga Google (YouTube). Mar alla markii aad gasho koontadaada, si fudud u aqbal rukhsadaha app oo waxaa laguu diri doonaa boggaaga xubintaada.
Fadlan la soco: ma helno macluumaadkaaga gelitaanka ama ma lihin wax akoon ah oo ku jira koontadaada YouTube si kastaba ha noqotee. Koontadaadu si ammaan ah ayey u adeegsan kartaa YTpals iyadoon wax walwal ah ka jirin YTpals ama qolo kale oo marin u heli karta.
Markaad ku taallo xariirka xubinta, waxaa lagu soo bandhigayaa qorshooyinka 4 YTpals, oo ay ku jiraan aasaaska, bilowga (Kuwa ugu caansan), Ganacsiga iyo Sharafta. Iyada oo ku xidhan baahiyahaaga gaarka ah iyo baahiyahaaga, waxaad go'aansan kartaa inaad raacdid qorshe Bilaash ah ama lacag yar bilkasta, waxaad raacdaa qorshe lagu bixiyo sida shirkada ama qorshaha caanka ah.
Sidee amaan u yahay YTpals?
YTpals waa adeeg aamin ah oo aamin ah oo ka badan xubnaha 300,000 +, iyadoo koritaanka daqiiqaduna tahay! Qarsoodigaaga iyo amnigaagu waa yoolkayaga #1, waana sababta aan u horumarinay nambar si aad ah u xoogan oo aan ku ilaalinay shabakada adoo adeegsanaya sirta ah ee '256-bit encryption'.
Macluumaadka galitaanka akoonkayga ma lagu kaydiyaa YTpals?
MAYA! Annagu maanaan helin wax macluumaad ah oo ka mid ah gelitaankaaga YouTube / Google waxaanuna kaydsanaynaa oo keliya magacaaga kanaalka, URL-ga kanaalka iyo cinwaanka e-maylka ee ku jira kaydkeena si shabakadda si sax ah kuugu soo gaadhsiin karto macaamiisha. Wax intaa ka badan ma jiraan!
Faahfaahinta Qorshaha Bilaashka ah (Qorshaha Aasaasiga ah)
Markaad gujiso batoonka "Dhaqdhaqaaqa", waxaa laguu geyn doonaa bog halkaas oo aad ugu baahan tahay inaad iska qorto 10 kanaal oo kale iyo sida 10 fiidiyow. Ka dib markaad taabato batoonka “Dhaqdhaqaaqa” ee cagaaran, fadlan si taxaddar leh u raac tilmaamaha shaashadda si aad si guul leh ugu dhaqaajiso qorshaha.
Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah oo isku dayaya inaad jeceshahay ama aad ku qorto kanaal, dhagsii badhanka "Skip" ee jaalaha ah si aad u muujiso kanaal cusub. Markaad si guul leh ugu diiwaangaliso kanaalada 10 oo aad jeceshahay fiidiyowyada 10, qorshaha aasaasiga ah waa la shaqeynayaa waxaadna ka heli doontaa macaamiisha 5 gudaha muddada dhaqdhaqaaqa saacadaha 24.
Nidaamkan cusubi waa mid wax ku ool ah wuxuuna dib kuugu soo celin doonaa dhammaan macaamiishooyinka 5 ka hor calaamadda 24-saac, kahor intaadan dib-u-dhaqaajin batoonka, laakiin maskaxda ku hay in dadka qaarkood ay kaa saari karaan adiga, taasoo kugu kalifaysa inaad hesho wax ku saabsan 3- Macaamiisha 5 inta lagu gudajiray hawlgal kasta. Kuwa ka saarta isticmaaleyaasha kale ee laga helo YTpals si toos ah ayaa loo mamnuucay.
Qorshaha aasaasiga ah wuxuu leeyahay xaddidaada ugu weyn ee 2, taas oo ah in laguu oggol yahay inaad u isticmaasho hal mar saacad kasta oo 24 ah waana inaad gasho YTpals wakhti kasta si aad dib ugu hawlgaliso qorshahaaga. Tani macnaheedu waa, ka dib markaad riixato batoonka "Dhaqdhaqaaqa", ma awoodi doontid inaad mar kale riixdo "Maqaato" badhanka saacadaha kale ee 24 kale. Marka muddada saacadaha 24 ay dhammaato oo laguu oggolaado inaad mar kale riixdo batoonka “Dhaqdhaqaaqa”, waxaad heli doontaa ogeysiis toos ah oo E-mayl ah si uu kuu xasuusiyo haddii aad dooratay inaad tan hesho.
Faahfaahinta Qorshaha Bilaashka ah (Qorshaha Bilowga)
Markaad gujiso batoonka "Dhaqdhaqaaqa", waxaa laguu geyn doonaa bog halkaas oo aad ugu baahan tahay inaad iska qorto 20 kanaal oo kale iyo sida 20 fiidiyow. Ka dib markaad taabato batoonka “Dhaqdhaqaaqa” ee cagaaran, fadlan si taxaddar leh u raac tilmaamaha shaashadda si aad si guul leh ugu dhaqaajiso qorshaha.
Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah oo isku dayaya inaad jeceshahay ama aad ku qorto kanaal, dhagsii badhanka "Skip" ee jaalaha ah si aad u muujiso kanaal cusub. Markaad si guul leh uga diiwaangaliso kanaalada 20 isla markaana aad jeceshahay fiidiyowyada 20, qorshaha Bilowga waa la shaqeysiin doonaa waxaadna ka heli doontaa macaamiisha 10 gudaha muddada dhaqdhaqaaqa saacadaha 12.
Nidaamkan cusubi waa mid wax ku ool ah wuxuuna dib kuugu soo celin doonaa dhammaan macaamiishooyinka 10 ka hor calaamadda 12-saac, kahor intaadan dib-u-dhaqaajin batoonka, laakiin maskaxda ku hay in dadka qaarkood ay kaa saari karaan adiga, taasoo kugu kalifaysa inaad hesho wax ku saabsan 7- Macaamiisha 10 inta lagu gudajiray hawlgal kasta. Kuwa ka saarta isticmaaleyaasha kale ee laga helo YTpals si toos ah ayaa loo mamnuucay.
Qorshahan Bilowgu wuxuu leeyahay laba kala duwanaansho oo waaweyn oo ku saabsan Qorshaha Aasaasiga ah. Farqiga u horeeya ayaa ah inaad karti u leedahay inaad dhaqdhaqaaq sameyso oo aad ka hesho macaamiisha 10 macaamiil kasta saacad kasta ee 12 halkii aad ka isticmaali lahayd saacad kasta oo 24 ah. Farqiga labaad ayaa ah in halkii aad u qori lahayd kanaalada kale ee 10, waa inaad iska diiwaan gelisaa 20. Is-qoritaanka dib-u-celinta kanaalka kale ee '20' waa sababta ugu weyn ee qorshahan loo oggol yahay in la hawlgeliyo saacad kasta oo 12 ah.
Waxaan isku dayaa inaan dhaqaajiyo qorshe, laakiin nidaamka ayaa ii oggolaan doonin inaan rukumo kanaalka.
Haddii ay dhibaato kaa haysato iska-diiwaangelinta kanaalka sabab kasta ha noqotee, si fudud u riix badhanka "Skip" badhanka si aad ugu shubto kanaal cusub. Marka kansarka cusub la xayiro, waxaad isku dayi kartaa inaad taas iska diiwaangeliso waana inay shaqaysaa.
Haddii aysan shaqeynin, guji xiriiriyaha "Galitaan" ee bogga kore si aad dib ugu soo gasho ka dibna waxaad awood u yeelan kartaa inaad ku laabato meeshii aad ka tagtay. Tani waxay bogsiin doontaa bogga.
Sideen u joojiyaa qorshahayga bilaashka ah?
Joojinta qorshahaaga bilaashka ah way fududahay. Si fudud ha u galin YTpals hana isticmaalin adeegyadeena mana heli doontid mar dambe ama ma soo diri doontid macaamiil cusub. Fadlan maskaxda ku hay in kanaalada aad iska diiwaan gelisay intii lagu jiray isticmaalka YTpals waa inay ku jiraan koontadaada si ay ugu noqdaan kuwa kale ee isticmaala.
Faahfaahinta Qorshaha Ganacsiga, Cilmiga & Caannimada (Qorshayaasha Bixinta)
Qorshayaasha Enterprise, Elite iyo Celebrity waa kuwo caan ku ah sababo kala duwan awgood.
Markaad iska qorto qorshaha Enterprise, Elite ama Celebrity, waxaad si otomaatig ah u helaysaa macaamiisha 10-15 (Enterprise), 20-30 macaamiisha (Elite), ama 40-60 macaamiil (Celebrity) maalin kasta, 100% si otomaatig ah. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ka bixi doona rukunka inkasta oo ay kaa tagayaan ku dhowaad 70-80% ee macaamiisha ka dib firfircooni kasta.
Si ka duwan Qorshayaasha Bilaashka ah, qorshayaasha la bixiyay waa 100% otomatik ah, oo macnaheedu yahay mar alla markii aad iska qorto, waligaa dib uma noqon doontid YTpals markale. Waxaan si otomaatig ah kuu siin doonaa macaamiil cusub maalin kasta sidaa darteed koontadaadu waxay ugu koreysaa xawaare aamin ah oo joogto ah, dadaal la'aan!
Qiimaha aan ku dalacaynay qorshayaashan ayaa si aad ah uga hooseeya inta badan boggaga intarnetka ee ay ka qaadayaan macaamiisha "been abuurka ah" ee hal mar la wada geeyo halkii ay ka muuqan lahaayeen, koritaanka maalinlaha ah ee aan bixinayno.
Qorshayaashan la bixiyay waxay xaqiijinayaan in koritaankaagu u muuqdo mid dabiici ah oo qiimihiisu yahay qayb ka mid ah qiimaha!
Waxaan hawlgaliyay qorshaha Enterprise, Elite ama Celebrity, laakiin rukumadaydu ma hawl gasho.
Haddii aad si guul leh u iibsatay qorshaha Enterprise, Elite ama Celebrity, laakiin rukunkaagu uusan firfircooneyn, fadlan nala soo xiriir oo noo soo dir shaashadda xawaaladda ama bogga risiidhada iyo URL-gaaga, kaas oo na siin doona dhammaan macluumaadka aan u baahan nahay inaan kaa caawino.
Waxaan hawlgaliyay qorshaha Enterprise, Elite ama Celebrity wax ka yar 24 saacadood ka hor welina ma helin wax macaamiil ah.
Markaad iibsatid qorshaha Enterprise, Elite ama Celebrity, kanaalkaagu wuxuu galayaa shabakadda dhowr saacadood gudahood ka dibna wuxuu ku sii jiraa gudaha 24 saacadood, taas oo ah bilowga maalintaada ugu horreysa. Inta lagu jiro muddadaas 24ka saacadood ah, waxaad heli doontaa kootada maalinta ee macaamiisha ka dibna wareegga ayaa dib u soo noqnoqonaya maalinta ku xigta. Maskaxda ku hay, macaamiisha si dhakhso leh uma yimaadaan, laakiin dhammaantood waxaa lagu keenaa muddada 24 saac, maalin kasta. Haddii aadan helin wax macaamiil ah 48 saac gudahood, fadlan noo soo dir fariin waana fiirin doonaa.
Macaamiishayda ayaa iska diiwaangelinaya Maxaa dhacaya?
Si looga jawaabo su'aashan, waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay in laga fiirsado. Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato:
Markaad adeegsaneyso adeegga YTpals, tirakoobyadu waxay muujinayaan in ku dhowaad 70-80% macaamiisha aad maalin walba heshaan ay ku sii jiraan koontadaada. Iyadoo taas la sheegayo, waxaan inta badan keennaa waxyaabo dheeri ah oo gacan ka geysanaya magdhawga khasaaraha.
Sababta aysan dhamaantood akoonkaaga ugu sii nagaan karin waa sababta oo ah dadka qaarkiis ma racaan qawaaniinta oo ma iska saaraan, laakiin waa la mamnuucay iyo / ama la ciqaabayo tan iyo YouTube-ka sidoo kale si otomaatig ah ayey u tirtiraan macaamiisha qaarkood.
Intaas waxaa sii dheer, algorithms-kii ugu dambeeyay ee YouTube-ka badanaa wuxuu tirtiraa qayb ka mid ah macaamiishooyinka la geeyay. Si loo yareeyo qadarka YouTube tirtirto, waa inaad diirada saartaa saarista fiidiyowyo cusub iyo kordhinta aragtida iyo jeceshayaasha fiidiyeyaashaada. Haddii aad leedahay macaamiil ka badan aragtida, macno macquul ma ahan in taasi dhacdo, markaa YouTube ayaa u janjeera in la tirtiro rukumo badan.
Inta badan macaamiisheenna aad bay ugu faraxsan yihiin adeegga sababta oo ah runtii waxay ka caawisaa kanaalkooda si ay ugu koraan qiimo jaban.
Waxaan jeclaan lahaa inaan joojiyo adeeggayga oo aan dib u helo lacag celin.
Haddii aad iibsato qorshaha isdiiwaangalinta oo aadan ku faraxsanayn adeegga, fadlan nala soo xiriir 3 maalmood gudahood taariikhda la siinayo taariikhda bixinta bixinta si buuxda ayaan u soo celin doonnaa oo waan baabi'in doonnaa rukunkaaga. Haddii aad nala soo xiriirto wax ka badan 3 maalmood ka dib markii bixinta lacag bixintaada la sameeyo oo aad codsato lacag celin, kooxdeena ayaa dib u eegi doonta koontadaada iyo haddii ay sabab u tahay qalad dhamaadkayaga, si buuxda ayaan u soo celin doonaa dalabkaaga, ama dib ayaan u soo celin doonaa qadarka la caddeeyay. maalmaha aan la isticmaalin bisha, ama waxna ha soo celin haddii ay tahay 7 + maalmood ka dib markii aad is qortay adeeggayaga.
Markaad iibsato shirkad ganacsi, Elite ama Caan bixiye, si toos ah ayaa laguugu soo dallacayaa isla maalinta bil kasta. Haddii mar uun aadan u baahnayn rukunkaaga YTpals, si fudud noogu soo dir farriin adoo adeegsanaya boggayaga La Xiriir annaguna waxaan dejin doonnaa koontadaada inuu dhacayo dhammaadka bisha aad hadda ku jirto.
Haddii, tusaale ahaan, waxaad ku qortaa 23rd ee bisha, laakiin qor noo soo saari xisaabtaada 10th ee bisha soo socota, waxaanu xisaabin doonaa xisaabtaada si aad u joojiso maalmaha 13 ee dambe, dhamaadka bisha aad ku jirtid. Haddii aad dooneysid inaad joojisid deg deg ah, si fudud noogu soo sheeg annaguna waan kuu sameyn karnaa taas adiga.
Adigu waajib kuma aha inaad ku qorto wakhti kasta, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad nagu soo qorto markaad diyaar u tahay inaad ka noqoto. Markaa waanu qaban doonaa oo waxaan kuu soo diraynaa farriin xaqiijin ah.
Ma u isticmaali karaa adeegga la ixtiraamay kaliya bisha 1?
Waad dhaqaajin kartaa qorshe lacag bixin ah adoo adeegsanaya ikhtiyaarkayaga lacag bixinta goobta waana joojin kartaa qorshahaaga wakhti kasta. Si fudud noogu soo dir emailka ka dib marka aad isku qorto qorshaha lacagta oo waxaan xisaabtaada u dejinaynaa inuu dhammaado bil ka dib isla markaana dib laguuguma soo dallici doono.
Malaha kaarka deynta? Dhibaato malahan. Ku bixi Kaararka Hadiyadda!
Hadda waad iibsan kartaa qorshooyinkaaga Enterprise, Elite ama Celebrity adigoo isticmaalaya kaararka hadiyadaha!
Faa'iidooyinka Adeegsiga Furdooyinka “lagu bixiyo kaararka hadiyadda”
GUDAHA: +150,000 goobood si ay lacagtaada ugu shubto kaarka hadiyadda.
LACAG LA'AAN: Dib u-cusboonaysiin, adeegsi ama ujuuradaha dhaqdhaqaaqa! Kaliya waa lacagtaada - kaarka hadiyadda.
SAFE: Ma aha inaad isdiiwaangeliso ama aad siiso macluumaad shakhsi / bangi oo aad ku bixiso kaararka hadiyadda.
FUDUD: Dukaamee oo ku bixi kaararka hadiyadda desktop-ka, kiniiniga ama moobiilka.
Ka soo iibso kaarka hadiyadda CVS / Farmashiyaha, Dollar General ama oBucks. Waxaad ka hubin kartaa goobta tafaariiqda kuugu dhow adoo ku qoraya nambarkaaga nambarka mid ka mid ah degelladooda internetka.
Soo gal koontadaada 'YTpals' oo dooro midkood "Enterprise", "Elite" ama "Celebrity" oo qorsheynaya in lagu cusboonaysiiyo.
Dooro “Kaararka Hadiyadaha” Bixinta oo ku qor faahfaahinta kaarka hadiyaddaada markii lagu weydiiyo.
Taasi waa! Hadda waad ku raaxeysan kartaa cusbooneysiintaada!
Ku soo biir shabakaddeena shabakadaha ka sarreeya milkiilayaasha channelka '500,000' ee guuleysta ee hela macaamiisha YouTube-ka ee bilaashka ah si ay uga caawiyaan kobcinta kanaalka YouTube-ka.
Hel Macaamiisha Bilaashka Ah Hada!